မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ Automotive Components China Manufacturers & Suppliers & Factory
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ Automotive Components - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 11 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ Automotive Components ထုတ်ကုန်များ)
မှို Automotive အစိတ်အပိုင်းများ၏ပလပ်စတစ် Injection
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ PP ပစ္စည်းအားဖြင့်ဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ PP, အမြင့်ဓာတု Resistance, Scratch Resistance, သဘာဝ Waxy ပုံပန်းသဏ္ဍာန်, ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်ခိုင်မာသော, အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်အပူ Resistance Lightweight ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မော်တော်ယာဉ် (Bumper, ဖုံးလွှမ်း, အနားသတ်ရန်),...
မော်တော်ကား Injection ကိုမှို Components
မော်တော်ကား Injection ကိုမှို Components, Injection ကိုတန်ဆာလည်းဆေးထိုးတန်ဆာနည်းလမ်းကိုသို့ ခွဲ. နည်းလမ်း ချ. သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမော်ဒယ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သွန်းသောပလပ်စတစ်များ၏ဖိအားပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များမှိုသို့ထိုးသွင်းသည်,...
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ Automotive Components
မြင့်မားသောဖိအားကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die
မြင့်မားသောဖိအားပစ္စည်း Casting Die